Ra’isal Wasaarihii Spain oo xilka laga qaaday
Ra'isal Wasaaraha cusub ee dalka Spain Pedro Sanchez
Barlamanka waddanka Spain ayaa kalsoonidii kala noqday Ra’isal Wasaarihii dalkaas Mariano Rajoy kaasoo muddooyinkii dambe lagu eedeynayay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin.
180 kamid ah golaha shacabka dalkaas ayaa ka codeeyay Rojoy, halka 169 mudane u codeeyeen Ra’isal Wasaaraha kalsoonida laga qaaday, waxaana ka aamusay hal Xildhibaan, codayn dhacday maanta oo Jimce ah.
Barlamanka dalka Spain ayaa Ra’isal Wasaare u doortay Pedro Sanchez kaasoo sheegay inuu xilka sii hayn doono inta laga gaarayo Doorasho waddankaas ee la qorsheeyay 2020-ka.
Tallaabadan ayaa timid xilli waddanka Spain ay muddooyinkii dambe ka taagnayd xiisadda siyaasadeed taasoo cirka isku shareertay markii Gobolka Catalan uu ku dhawaaqay gooni isu taag.
Mariano, ayaa cadaadis badan sameeyay si gobolkaas uga mid ahaado dalka Spain.
Waa dalkii 2aad oo kamid ah waddamada Midowga Yurub kuwaasoo faraha la gala qalalaaso siyaasadeed, waxaana xasarad tan lamid ah horay uga taagnayd waddanka Talyaaniga kaasoo ilaa hadda aan la dhisin xukuumadda wixii ka dambeeyay doorashadii dhacday bishii March.
Diyaarad ku jeeday Spain oo si deg deg ah loo soo dejiyay [Akhri Sababta]
Caalamka 01.06.2018. 20:07
Diyaaraddan ayaa ka jirtay hawada, iyadoo siday rakaab badan oo kasoo baxay Holland...
Spain oo Safiir cusub usoo magacawday Soomaaliya [Sawirro]
War Saxaafaded 01.03.2018. 11:52
Cayaaraha 16.12.2017. 19:42
Dibadbaxyo ka bilowday dalka Spain
Caalamka 07.10.2017. 16:13
Xildhibaano la xiray oo xaadiray furitaanka baarlamaanka Spain
Caalamka 21.05.2019. 18:48